कृषिमा स्थानीय तहहरुको अवसर, समस्या र चुनौती – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कृषिमा स्थानीय तहहरुको अवसर, समस्या र चुनौती
२०७७ मंसिर ८, सोमबार ०८:४२ गते
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३६ मा मौलिक हकको रुपमा खाद्यसम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने व्यवस्था गरिएको छ भने संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीभित्र कृषि क्षेत्रसमेत समेटिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार तथा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको एकतिहाइ योगदान भएकाले नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई निकै मह¤वका साथ हेर्ने गरिन्छ । कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । यसले खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा गरेको योगदान, जनसहभागिता, राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य आम्दानीमा खेलेको भूमिका र रोजगारीका अवसरको सिर्जनामा खेलेको भूमिका अतुलनीय नै मान्नुपर्दछ ।
यसरी बहुआयामिक भूमिका खेलिरहेको कृषि क्षेत्र, सरकारी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका बाबजुद गति नलिनुको कारण के छ त ? राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवाला सबैले मनन गर्नुपर्ने भएको छ । कृषि वस्तुको आयात दिनानुदिन बढिरहेको छ । बर्सेनि साढे दुई खरब मूल्यबराबरको कृषि वस्तुको आयात हुनुले यो तथ्य छर्लङ्ग नै पार्दछ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ, तर पनि कृषिजन्य उत्पादनमा आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गर्नु वा प्राथमिकतामा नपर्नु, स्थानीय स्रोत, साधन र उपलब्धताको आधारमा कृषिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, सर्वेक्षण नहुनु, पूर्वाधार विकासभित्र कृषि पूर्वाधारलाई नसमेटिनु, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था नहुनु वा अनुदान वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, स्थानीय तहमा कृषिसम्बन्धी नीति, नियम, योजनाको अभाव हुनु वा निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनु, कृषि बिमामा साना तथा मझौला किसानको पहुँच नहुनु, कृषि पूर्वाधारको कमी हुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, सिंचाइ प्रणालीको विकास तथा विस्तार नहुनु आदि जस्ता मुख्य आधारभूत कुराहरुमा स्थानीय तहको ध्यान नपुग्नु वा प्राथमिकतामा नपर्नुले पनि कृषि क्षेत्रको समुचित विकास नभएको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोतसाधन र सामग्रीहरुको उपलब्धताको आधारमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि हुने खालको नीति तथा योजना अङ्गीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, विविधीकरण र औद्योगिकीकरण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउन स्थानीय तहहरुले प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न कृषि सहकारी वा कृषक समूहको अवधारणा अङ्गीकार गर्दै कृषि पकेट क्षेत्रहरुको विकास गरी कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । कृषि पेसालाई सम्मानजनक, मर्यादित बनाई कृषिमा आश्रित परिवारहरुको जीविकोपार्जन गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न तथा रोजगारी सृजना गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने खालको कृषि अध्ययन अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्न स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रको समुचित विकास गर्न, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गर्न, कृषिमा रोजगारी सृजना गर्न, कृषिमा आश्रित परिवारको गरिबी न्यूनीकरण गर्न, खेतीयोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्न तथा परम्परागत, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक, व्यावसायिक, उत्पादनमुखी कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न हावापानी र भौगोलिक परिवेशको आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन अनुसन्धान, सर्वेक्षणको आधारमा कृषि विकास योजना तर्जुमा गरी सोहीबमोजिम कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
हाल कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत संख्या युवाको छ । त्यसमध्ये कुल युवा संख्याको ५०.२ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा छ । कृषिले युवालाई समृद्ध बनाउन सकेको भए अहिलेको भन्दा धेरै मानिस गरिबीको रेखामाथि हुनेथिए । स्नातक गरेर पनि बेरोजगार बसेका २६.१ प्रतिशत युवाको गन्तव्य पनि कृषि नै हुनेथियो । युवा जनशक्ति कृषिमा आकर्षित गर्न नसक्दा श्रमको अभाव र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कृषि क्षेत्रका लागि विडम्बना के छ भने बरू यो पेशा त्यागेपछि मानिसहरुले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएका छन् । एकदमै थोरै मानिसले मात्र खेतीपातीबाट आफ्ना आवश्यकता पूरा गरेका छन् । धेरै मानिसहरु व्यापार, जागिर, वैदेशिक रोजगारी तथा आम्दानीका अरु स्रोतमा आकर्षित छन् ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन कृषिमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा बढी उत्पादन गर्ने कृषकको मनोबललाई उच्च राख्न तथा अरु कृषकलाई पनि कृषि पेशामा समेत आकर्षित गर्न कृषि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । हावापानी तथा भौगोलिक परिवेशअनुसार बाली, पशुपक्षी, फलफूल, तरकारी तथा माछालगायत अन्य कृषि क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा पहिचान तथा विकास गरी कृषकलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्रीहरु, कृषि यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी, औजार, मलखाद, विषादी, उन्नत बीउबिजन, सोलार पम्प, इलेक्ट्रिक मोटर, स्प्रेयर आदि स्थानीय तहले अनुदानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक योजनाको आधारमा प्रतिफलमुखी कृषि उद्यम व्यवसायको अनुदानमा समेत जोड दिनु आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति थोरै जमिन (०.६८ हे. प्रतिघरधुरी) र टुक्रिएको र खण्डीकृत जहाँ कृषि यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण गर्न गाह्रो छ । नेपालको कुल भूभागको १७.९८ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि भएता पनि ६६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिंचाइ पुग्नु जलस्रोतको धनी भनिएको देशको उपहास हो । सिंचाइ पुगेको ६६ प्रतिशत भूमिमध्ये पनि ३६ प्रतिशतमा मात्र बाह्रै महिना सिंचाइको सुविधा पुग्ने देखिन्छ ।
कृषि पूर्वाधारहरु जस्तैः सिंचाइ, सडक, कृषि हाटबजार, शीतघर, शीतभण्डार, गोदामघर, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, प्रयोगशाला आदि पूर्वाधारहरुको विकासले कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उल्लेख्य सहयोग गर्छ । हावापानी तथा जलवायुमा भएको परिवर्तनले समयमा वर्षा हुने निश्चित हुँदैन । परिणामस्वरुप कृषिमा गरिएको लगानीअनुसारको उत्पादनमा कमी आउँछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिंचाइको वैकल्पिक उपायहरु जस्तैः डिप ट्युबवेल, कृषि विविधीकरण, डिजेल वा सोलार पम्प सेट आदिको प्रयोग गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
रासायनिक मल कारखाना नहुँदा विदेशको भर परिरहनुको विकल्प छैन । त्यसमा हुने अवाञ्छित खेल र किसानको मर्का एवं उत्पादन र उत्पादकत्व न्यूनताको भर्पाइ गर्न नसकी नै नेपालले गुजारा चलाउनुपर्ने पो हो कि ? वर्तमान पुस्ता चिन्तित पनि छ । गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीहरु मल, बीउ, बिरूवा, चल्ला, बोका, राँगा, साँढे, सिंचाइ, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार जस्तैः शीतगृह, कृषि संकलन केन्द्र, हाटबजारको कमी हुन् ।
कृषि बिमामा कृषकहरुको सहज पहुँच पुगेको देखिँदैन । बाढी, पहिरो, सुख्खा, असिना, शीतलहर, जनावर आतङ्कजस्ता प्रकोपहरुका कारण धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, माछा, कुखुरालगायत अन्य कृषिजन्य उत्पादनहरुमा हुने जोखिममा कमी ल्याउन बिमा आवश्यक रहेको छ । कृषकहरुलाई कृषि बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुको साथै कृषि बिमामा सहज पहुँच कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कृषि उत्पादन सामग्रीहरु, कृषि यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी, औजार, मलखाद, विषादी, उन्नत बीउबिजन सिंचाइ आदिको बिमा प्रिमियममा लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
मूल्य शृङ्खलाले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको सम्पूर्ण प्रणालीलाई समेट्ने गर्छ । स्थानीयस्तरमा हुने कृषि उत्पादनहरुको मूल्य शृङ्खला निर्माण र विकासमा समेत स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको लगानीलाई सुनिश्चित गर्न मूल्य शृङ्खला अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । कृषि सामग्री आपूर्तिकर्ता कृषक, व्यापारी, प्रशोधनकर्ता, सेवाप्रदायकहरु लगायत मूल्य शृङ्खलाका अन्य कर्ताहरुबीचको सञ्जाललाई सबल, सक्रिय र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ ।
विगत १७ वर्षको बजेट विनियोजन हेर्दा कृषि मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय बजेटको २ देखि मुस्किलले कुनै वर्षमात्र ३ प्रतिशतसम्म छुट्टयाइएको देखिन्छ । राष्ट्रिय बजेटको ०.२४ भन्दा बढ्न सकेको छैन, अनुसन्धानको त कुरै नगरौँ । विशेषगरी, छिटै नष्ट भएर जाने र नगदे वस्तुहरु तरकारी, फलफूलको बजारीकरण त्यति व्यवस्थित नहुँदा बिचौलियाको बिगबिगी छ । कृषकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । दूध, मासु, अण्डाको बजारीकरणमा पनि यदाकदा समस्या आइरहने देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा कमजोर र भौगोलिक विकटतायुक्त भू–धरातल, विश्व मौसममा आएको फेरबदल, बाढीपहिरो, हुस्सु–कुहिरो भूस्खलन बढिरहेको छ । माटोको अम्लीयकरण र प्राङ्गारिक पदार्थको कमी, असन्तुलित मलखादको प्रयोग, अनियन्त्रित विषादीको प्रयोग र एन्टिबायोटिक्स प्रयोगमा अज्ञानता छ । कृषि वस्तुको बढ्दो आयात, मौलिक र रैथाने ज्ञान तथा सीपलाई परिष्कृत र विश्वव्यापीकरण गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । भौतिक पूर्वाधारको न्यूनताका साथै उत्पादन लागत बढी भएकाले कृषि उपजहरु महँगो भएका हुन् । पुराना रोगकीराहरुको समाधान नहुनु र नयाँ–नयाँ रोगकीराको प्रकोप बढिरहेको अवस्था छ ।
स्थानीय सरकारले कृषिलाई प्रमुखता नदिएको महसुस हुन्छ । अहिले धेरैजसो स्थानीय सरकार आफ्नो क्षेत्रमा कसरी, के गरेर नयाँपन ल्याउने भनेर स्पष्ट नै भइसकेका छैनन् । इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको अभावमा उनीहरु परम्परा धान्ने अड्डाजस्तो बनेर समय गुजारिरहेका छन् । स्थानीय तहहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मह¤वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषिलाई अगाडि बढाउने काम थाल्नु आजको आवश्यकता हो । हालको संरचनाबाट त्यो सम्भावना देखिँदैन । प्राविधिक दक्षताबिना अबको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन ।
जब कि, स्थानीय तहहरुले उच्च प्राथमिकताका साथ काम नगरे गाउँहरुमा कृषि पेशाले काँचुली फेर्दैन । कृषि पकेट क्षेत्रहरुका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच जना विषयगत प्राविधिक राख्नुपर्ने देखिन्छ, जहाँ अहिले एउटै प्राविधिकले सबै कृषि वस्तुको रेखदेख गर्नु परेको स्थिति छ । नेपालका स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरु फिल्ड होइन, कार्यालयको काममा व्यस्त भएको पाइन्छ । कृषि विकास कार्यालयहरु ज्ञान केन्द्रमा परिणत भएपछि कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढेको छ । यसबीचमा देखिएका समस्या हल गर्नेबारे कतैबाट केही काम भएको देखिएन । कृषिको बजेट रकमान्तर गरेर बाटोलगायतका पूर्वाधारमा लगाएको पनि देखिएको छ । बचेखुचेको थोरै बजेट तालिम, भ्रमण, बिरूवा वितरणलगायतका तामझाम गरेर सक्ने गरिएको पनि यथार्थ नै हो । अर्थात्, अहिले ठ्याक्कै पञ्चायती मोडेलको कृषि विकास भइरहेको छ ।
स्थानीय तहले गर्ने पहिलो काम भनेको भूमि, कृषि र कृषकको परिवेश विश्लेषण नै हो । आफ्नो क्षेत्रमा कृषि भूमि कति छ ? त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ ? किसानको अवस्था र सामथ्र्य कस्तो छ ? खाद्यान्न आयात–निर्यातको अवस्था के छ ? अवसर के–के छन् ? यस विषयमा मसिनो गरी विश्लेषण गर्नुपर्छ । विश्लेषण प्रक्रियामा सबै वर्गका किसानको सहभागिता गराउनुपर्छ । यस्तो विश्लेषणपछि भू–उपयोग र कृषि विकासको वडागत योजना बनाउनुपर्छ । र, त्यसलाई समेटेर गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरको कृषि विकास योजना निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो केही क्रियाकलापमात्रै राखेर पुग्दैन । योजना वडागत र विस्तृत चाहिन्छ । दृष्टिकोणसहितका योजनामा भूमि, श्रम र रोजगारीको अन्तरसम्बन्धसमेत सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
किसानको वर्गीकरण तत्काल गर्नुपर्ने अर्को काम हो । चरम गरिबी, सुकुमबासी, हलिया, कमैयासँग जग्गाजमिन नहुनु समस्या हुन् । यो विषय धेरै पहिलेदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि यसले व्यवहारमा मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट किसानसमेत सक्रियरुपमा सहभागी भई निश्चित लचिला मापदण्डका आधारमा कृषक वर्गीकरण गरिनुपर्छ । र, सोहीअनुसार केकस्ता सेवासुविधा वा अनुदान पाउने हो निक्र्याेल गर्नुपर्छ । किसानले पाउने सबै अनुदान र सेवा स्थानीय सरकारमार्फत मात्र उपलब्ध गराइनुपर्छ । किसानको लगत संकलन र वर्गीकरण पनि स्थानीय तहबाट भयो भने वास्तविक हुन्छ । नेपालको भूगोल, जलवायु र जैविक विविधता अपार सम्भावना बोकेका प्रमुख क्षेत्रहरु हुन् ।